Roll Container Factory - China Roll Container mpanamboatra, mpamatsy
Cage Metal Logistics Security Wires Mesh Roll Cage
Ity palitaom-baravarankely vita amin'ny rindrina "A" mety sy miovaova 3 ity dia manondro koa ny trolley cage cage cage na Logistic wire mesh roll cage trolley, izay mety amin'ny fitaterana fonosana, boaty ary entana marobe hafa. Manolotra tombony azo avy amin'ny fitehirizana habaka amin'ny fahafaham-baraka mora tehirizina rehefa tsy ampiasaina.
Trolley tranofiara mavesatra ho an'ny fitaterana sy fitahirizana fitaovana （3 Sided）
Ity trolley tranofiara mety sy malefaka ity dia antsoina koa hoe trolley fitoeran-javatra ary mety tsara amin'ny fitaterana fonosana, boaty ary entana maro hafa. Izy io dia namboarina tamin'ny fantsom-by vy sy lampihazo. Manolotra tombony azo avy amin'ny fitehirizana habaka amin'ny fahafaham-baraka mora tehirizina rehefa tsy ampiasaina.
Trolley tranofiara mavesatra ho an'ny fitaterana sy fitahirizana fitaovana (4 Sided)
Ity trolley tranofiara mety sy malefaka ity dia antsoina koa hoe tranom-boankazo fitehirizana, na tranom-bakoka mihodina. Izy io dia mety amin'ny fitaterana fonosana, boaty ary entana lehibe hafa.
Pallet tainer dia rafitra fikirakirana fitaovana fitehirizana fitaovana natao hitahirizana fitaovana amin'ny paleta. Izy io dia rafitra matanjaka be amin'ny fametrahana entana mba hisorohana ny firodanan'ny rafitra. Araraoty ny toerana rehetra azo tehirizina miaraka amin'ny tainer pallet. Na ny vokatra tsy azo sintomina aza dia azo apetaka amin'ny valindrihana. Rehefa ampiasaina. Ny tainer paleta dia azo akorofana hamonjy ny toerana fitahirizanao. Izy io dia rafitra fitehirizana maoderina mazàna ho an'ny trano fitehirizana, trano fanamboarana, foibe fivarotana, ary toerana fitahirizana sy fizarana hafa. Izany dia hampitombo ny haben'ny fitehirizana ireo entana voatahiry ary avy eo hihena ihany koa ny vidin'ny asa.
Trolley wire wire harato mavesatra be ho an'ny fitaterana sy fitahirizana fitaovana (4 lafiny)
Ny trollley tranom-borona mavesatra mavesatra dia matetika ampiasaina amin'ny trano fitobiana sy fivarotana lehibe. Izy io dia trolley finday sy azo ahodina miaraka amina casters efatra handefasana sy hitehirizana fitaovana.
Volavolan-tariby ho an'ny rafitra fanatobiana paleta
Ity takelaka mavesatra adidy mavesatra ity dia natao hampiasaina amin'ny fametahana paleta indostrialy mba hamoronana faritra fitahirizana zavatra kely kokoa. Mora ny mametraka izay mametraka azy eo amin'ny andry fotsiny fa tsy manamboatra takiana.
Trolley tranofiara mavesatra ho an'ny fitaterana sy fitehirizana fitaovana (talantalana 4)
Boaty harato vita amin'ny pallet nandrendrika ho fitahirizana trano fitehirizana
Ny boaty pallet harato dia vita amin'ny tariby nandrisika farafahakeliny amin'ny savaivony 5mm ary natao mora aforitra sy azo stackable. Izy io dia ampiasaina hanamboarana ny fahafahan'ny trano fitehirizana, ny fitehirizana sy ny fikajiana baiko ary koa ny fanatsarana ny fampiasana mahomby ny toerana fitahirizana.